Ngaba iindleko ze-SEO zindleko eziphantsi kwezoshishino ezincinci?
Nangona "ixabiso eliphantsi le-SEO = ingozi" kunokuba yingqungquthela kunengxelo yangempela, iimeko ze-SEO ezimbi kwixabiso elincinci aliqhelekanga. Amashishini amancinci angabelana ngokukodwa nale ngxaki njengamaziko amaninzi aphantsi kweendleko ze-SEO zijolise kubo nakwamashishini angingqi kunye neendawo ezininzi zinikeza izandi ezithandekayo kwi-e-venkile kunye neziza ezizama ukukhuthaza kwiindawo ezikhuphisana kakhulu.
Ukulandela eli xabiso eliphantsi i-SEO inika ngokungahambi kakuhle kungakhokelela kule miphumo:
Isigwebo ngenxa ye-Black Hat SEO. Amaziko amaninzi e-SEO aphulaphula ngokugqithisileyo izikhokelo ze-Google ngamagama angundoqo okugaxeka, iimibhalo ezifihliweyo, iingcango kunye nezinye iindlela ezimbi zihlala zinikela ngamanani aphantsi kwiinkonzo zabo.Le nxalenye yengcambu yabo: bathembisa ukunyusa ngamandla kwiindleko ezikhangayo kunye nokuzisa ukunyuswa okuthembisiwe. Lo mgaqo-nkqubo ubangenisa abaninzi abanini-site abanamava abangaqapheli ukuba ukukhula kwee-rankings ezifunyenwe kwi-Black Hat SEO okwethutyana kwaye ukuwa - mootoriõli.
Ukuhlawula. Ngamanye amaxesha, ufumana iinkonzo ezisezantsi ze-SEO zeenkampani ezincinci okanye iinkampani ezinkulu ezingekho iHat Hat. Esikhundleni saloo nto, bancinci kwiindlela zokunyusa kwaye onke amanyathelo ayenziwa yiqela elingenamava. Ngoko ke, emva kokuba ufezekise iphuzu elithile, iphulo lakho likhawuleza nje ngokuba abaphathi be-SEO bakho abazi ukuba bangaphi ukusuka apha. Kwakhona abanokuthi bangenayo indlela yokuqhubela phambili, njengexabiso eliphantsi = umvuzo ophantsi.
Umgangatho ophantsi womxholo. Isiqulatho sinendima enkulu kwinqaku elungileyo, ukuqhagamshelanisa isakhiwo nokwandisa izinga lokuguqulwa. Nangona ukuba umxholo wakho awufanelekanga, uyingqayizivele okanye unomdla wokufunda, ukufaka amagama angundoqo kunye neekhonkco akusayi kukwandisa amanqanaba akho. Ngelishwa, i-copywriting efakwe kwiinkonzo ezisezantsi ze-SEO zoshishino zincinci zibonisa ukuba uphando kunye nokuhlela njengoko iqela elinjalo lingabikho abalobi abanamava. Ngoko ke, ungalindelanga iziphumo eziphezulu kumxholo oye wakhokhela i-$ 10.
Le ngcaciso ayithethi ukuba ufanele ugweme "ukuhlawuleka" kunye "nexabiso elincinci" kwi-SEO nayiphi na indleko. Oko kufuneka uyenze, kukuqaphela ingozi echaphazelekayo xa ufuna iinkonzo eziphantsi ze-SEO kwi-shishini lakho elincinci. Ixabiso elingenakuqhathaniswa alisoloko lilingana nexabiso elincinci, kwaye umgaqo-nkqubo wexabiso lentengo awunayo into efana ne-scam. Nangona kukho ii-arhente ezimbi, ezonakalisa idumela leefowuni ze-SEO, siya kunceda ufumane ukuhlula.
Ixabiso elithengiweyo elihlawulekayo: yintoni umehluko?
Kunokwenzeka ukuba ufumane i-SEO efanelekileyo kwixabiso elaneleyo ngaphandle kwee-arhente ezikumgangatho ophantsi. Awudingi ukuba yi-SEO guru okanye ube nomtshina wamanga. Uphando olunzulu lukhulu kunene.
Yenza uludwe lwee-agencies ze-SEO, ezinikezela ngoncedo oluncinci oluthile lwezobugcisa kumashishini amancinci amancinci;
Qhathanisa iindleko zabo kunye neentlobo zeenkonzo abazinikela ngaloo xabiso;
Khangela indlela abaziphakamisayo ngokwayo: ukuba uthembisa iziphumo ezikhawulezayo kunye nokugqithisela, izithembiso zabo zingenakulungela into;
Qaphela ukuba zonke ii-arhente zineepotfoliyo. Dlulela ngaphandle iinkampani ngaphandle komnye. Emva koko funda iiprojekthi amafemu asebenza kuzo ukuvavanya ubuchule babo. Ungakwazi ukutyelela iisayithi ii-arhente zenze i-SEO ukuze zibone indlela abahamba ngayo ngokumalunga namaqhinga abo.
Qhagamshelana neengcali ze-arhente ngalinye kwaye ubone uhlobo oluthile lokwenza imvakalelo, enoba ziqinisekile kwaye zinobuhlobo okanye ziyimfihlelo, zikhohlakele kwaye zikhawuleza ukuba zithenge iimveliso zazo. Buza imibuzo eza kubonakalisa ulwazi lwabo lwezikhokelo ze-Google, inkqubo yokukhuthaza kunye ne-SEO. Ngaba bayakhawuleza ukukuthembisa iziphumo ngaphandle kokucela ngakumbi ngeziko lakho? Ngaba bagxininisa ngobungakanani kunye neziphumo ezifutshane?
Fundisisa imvelaphi kunye ne-bio yenkampani. Nangona ama-arhente anamava ama-5 atshabalekayo, musa ukukhawuleza ukulahla iifemu ezi-1 ubudala. Iinkampani ezininzi ezincinci zisekwe ngcali eziye zeshishini iminyaka eli-10. Eli nqaku kufuneka likhankanywe kwi-bio yenkampani kunye neblogi ukuba kukho enye.
Khangela izibuyekezo. Ngokuqhelekileyo, zonke iinkampani ezithembekileyo zibeka iimbuyekezo zazo kwisayithi yazo okanye zibe neakhawunti kwiwebhusayithi yokuphonononga ukuvumela abasebenzisi bashiye ingxelo kwaye baphendule kuyo. Ukuba i-arhente, enika iinkonzo ezisezantsi ze-SEO kwi-intanethi encinci ye-intanethi igweme ukusebenzisana namazwana, mhlawumbi ikhuselekile ukujongana.
Namhlanje, iinkampani ze-SEO ziza kwiindidi ezahlukahlukeneyo kwaye zihambelana nomgaqo-nkqubo wazo wexabiso. Ngoko ke, esikhundleni sokuba ujike ngokukhawuleza kwiinqanaba ze-SEO, ezinikeza izixazululo ezingabizi, yenza uphando lwakho kwaye ubone ibhalansi yangempela yamanani kunye nomgangatho. Ezinye iindlela ungase ulahleke ezinye izinto ezimangalisayo!